အီဒီယံတွေနဲ့ဘန်းစကားတွေကိုဘာကြောင့်လေ့လာသင့်သလဲ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on November 20, 2012 at 17:49 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာလိုက်စားနေတဲ့ကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲမှာ အီဒီယံတွေ ဘန်းစကားတွေကို လေ့လာသင့်သလား၊ ရိုးရိုးတန်းတန်း တစ်မျိုးပြောတတ်ရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လား စသည်ဖြင့် ဒွိဟပွားတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အီဒီယံတွေ ဘန်းစကားတွေဟာ လေ့လာရတာလဲ ပျင်းစရာကောင်းတယ်။ ကိုယ့်အတွက် လတ်တလော အသုံးပြုဖို့လည်းမလိုသေးဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက် ဘေးဖယ်ထားခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်းတစ်နည်းအားဖြင့်တော့မှန်ပါတယ်။ အခြေခံအဆင့်ကျောင်းသားတွေအတွက် သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းတွေ၊ဝေါဟာရအသစ်တွေနဲ့လုံးချာလည်လိုက်နေချိန်မှာတစ်လုံးချင်းဘာသာပြန်လို့မရတဲ့ ဒီအသုံးအနှုန်းတွေဟာ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်တာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြေခံနဲ့ အလယ်အလတ်အဆင့် သူလိုငါလိုအင်္ဂလိပ်စာကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကား အနေနဲ့ ပြောဆိုသူတွေနဲ့သာတွေ့ထိဆက်ဆံမယ်လို့ ကန့်သတ်ထားမယ်ရင်တော့လဲ ကိုယ့်သဘောအတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့အဆီအနှစ်အလှအပတွေကို ခံစားနားလည်ချင်တယ်၊ သဘာဝအတိုင်းသူတို့ပြောတာနားလည်ချင်တယ်၊ကိုယ်လည်းရံဖန်ရံခါပြောတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အီဒီယံတွေကိုလေ့လာဖို့လိုလာပါပြီ။ မြန်မာစကားမှာလည်း “ကားကြပ်လိုက်တာ ငါးပိသိပ်ငါးချဉ်သိပ်ပဲ” “စည်လိုက်တာကြက်ပျံမကျပဲ” လို့ပြောတာနဲ့ “ကားကြပ်လိုက်တာ” “စည်လိုက်တာ” လို့ပြောတာ ပြောရတဲ့အရသာခြင်းဘယ်လောက်ကွာတယ်ဆိုတာသိကြမှာပေါ့။
ဒါကြောင့်မလို့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာ David A. Bailey ရဲ့ Why Should I Learn Idiomatic Expressions And Slang In English? ကိုဘာသာပြန်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက် ၁။ သူတို့သဘာဝအတိုင်းပြောတာမျိုးဖြစ်လို့ It's Just The Way They "Chew The Fat"
ပထမဦးစွာ ဘန်းစကားတွေ၊ အီဒီယံတွေကိုလေ့လာသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါဟာသူတို့ဒီလိုပဲပြောလေ့ရှိလို့ပါ။
သူတို့သုံးသွားတဲ့ဘန်းစကားကိုကိုယ်နားမလည်ရင်သူတို့ဘာပြောတယ်ဆိုတာလဲနားလည်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့.ကိုယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းတွေ၊ ကျောင်းတွေမှာသင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်း Formal English စာစကားကိုသာတွယ်ကပ်ထားရင် တကယ် native speakers တွေနဲ့တွေ့ကြုံပြောဆိုရတဲ့အခါ နားလည်ဖို့အခက်အခဲနဲ့ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုမှာ ကျွန်တော့်မိန်းမနဲအလုပ်အတူလုပ်ဖူးတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ နမူနာရိုးရိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ အမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ချို့ စီးပွားရေးပူးပေါင်းလုပ်ဖို့ကုမ္ပဏီကိုရောက်လာကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကုမ္ပဏီထဲလျှောက်ပတ်ပြီးလူတိုင်းနဲ့အလာပသလာပပြောနေကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့အထဲကတစ်ယောက်က ဒီလူငယ်ရဲ့အလုပ်စားပွဲပေါ်ခါးကိုင်းပြီး "What do you call yourself?" လို့မေးလိုက်တယ်။ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအင်္ဂလိပ်စာလိုက်စားလာတဲ့ သနားစရာသတ္တ၀ါလေးဟာ သူ့ကိုဘာမေးတယ်ဆိုတာ မသိရှာပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တစ်လျှောက်လုံးကျောင်းမှာ နာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲလို့မေးချင်ရင် "What's your name?" လို့သာမေးဖို့သင်ယူခဲ့ရလို့ပဲပေါ့။
ဒီတော့ သေချာတာက အင်္ဂလိပ်စကားကိုမိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောဆိုသူတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှစကားပြောဖို့မရည်ရွယ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြောဆိုပုံတစ်မျိုးထက်ပိုတတ်ဖို့ သောကရောက်စရာမလိုဘူးလို့ထင်တာပဲ။
အကြောင်းပြချက် ၂။ အသုံးထူးစကားတွေကိုကြားတာနဲ့နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ You Will "Get It" When You Hear The Expressions"
ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ကတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောဆိုတတ်အောင်လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသုံးများတဲ့ အီဒီယံတွေ ဘန်းစကားတွေကိုစာဖတ်ရင်းတွေ့တဲ့အခါ သူတို့ကို ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားသို့ တစ်လုံးခြင်းကောက်ယူဘာသာပြန်မိလိမ့်မယ်။ အသုံးထူးစကားစုဖြစ်လို့ တစ်လုံးခြင်းဘာသာပြန်တဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ်မရှိဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်မလို့ မိမိကိုယ်ကို အီဒီယံတွေ ဘန်းစကားတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်အောင်စလုပ်နေပြီဆိုရင် native English speakers တွေနဲ့စကားပြောရတဲ့အခါ၊ စာဖတ်ရင်းတွေ့တဲ့အခါ ဘာဆိုလိုသလဲဆိုတာ နားလည်နိုင်မှာပေါ့။ ကဲကျောင်းသားအပေါင်းတို့၊ မနှေးအလျှင် ဘန်းစကားတွေ၊ အသုံးထူးတွေ၊ နယ်ပယ်အလိုက်သုံးတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကို နားလည်အောင်ကျိုးစားကြပါတော့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အင်ျဂလိပျစာကိုလလေ့ာလိုကျစားနတေဲ့ကြောငျးသားတှစေိတျထဲမှာ အီဒီယံတှေ ဘနျးစကားတှကေို လလေ့ာသငျ့သလား၊ ရိုးရိုးတနျးတနျး တဈမြိုးပွောတတျရငျပွီးတာပဲမဟုတျလား စသညျဖွငျ့ ဒှိဟပှားတာမြိုးတှရှေိတတျပါတယျ။ နောကျတဈခုက အီဒီယံတှေ ဘနျးစကားတှဟော လလေ့ာရတာလဲ ပငျြးစရာကောငျးတယျ။ ကိုယျ့အတှကျ လတျတလော အသုံးပွုဖို့လညျးမလိုသေးဘူးလို့ယူဆတဲ့အတှကျ ဘေးဖယျထားခွငျးခံရတတျပါတယျ။ ဒါဟာလညျးတဈနညျးအားဖွငျ့တော့မှနျပါတယျ။ အခွခေံအဆငျ့ကြောငျးသားတှအေတှကျ သဒ်ဒါစညျးမဉျြးတှေ၊ဝေါဟာရအသဈတှနေဲ့လုံးခြာလညျလိုကျနခြေိနျမှာတဈလုံးခငျြးဘာသာပွနျလို့မရတဲ့ ဒီအသုံးအနှုနျးတှဟော ဝနျထုပျဝနျပိုးဖွဈတာပေါ့။
ကြှနျတျောတို့ဟာ ကိုယျ့ကိုယျကို အခွခေံနဲ့ အလယျအလတျအဆငျ့ သူလိုငါလိုအင်ျဂလိပျစာကို နိုငျငံခွားဘာသာစကား အနနေဲ့ ပွောဆိုသူတှနေဲ့သာတှထေိ့ဆကျဆံမယျလို့ ကနျ့သတျထားမယျရငျတော့လဲ ကိုယျ့သဘောအတိုငျးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဘာသာစကားတဈခုရဲ့အဆီအနှဈအလှအပတှကေို ခံစားနားလညျခငျြတယျ၊ သဘာဝအတိုငျးသူတို့ပွောတာနားလညျခငျြတယျ၊ကိုယျလညျးရံဖနျရံခါပွောတတျခငျြတယျဆိုရငျတော့ အီဒီယံတှကေိုလလေ့ာဖို့လိုလာပါပွီ။ မွနျမာစကားမှာလညျး “ကားကွပျလိုကျတာ ငါးပိသိပျငါးခဉျြသိပျပဲ” “စညျလိုကျတာကွကျပြံမကပြဲ” လို့ပွောတာနဲ့ “ကားကွပျလိုကျတာ” “စညျလိုကျတာ” လို့ပွောတာ ပွောရတဲ့အရသာခွငျးဘယျလောကျကှာတယျဆိုတာသိကွမှာပေါ့။
ဒါကွောငျ့မလို့ အင်ျဂလိပျစာလကေ့ငျြ့သငျကွားပေးနတေဲ့ဆရာ David A. Bailey ရဲ့ Why Should I Learn Idiomatic Expressions And Slang In English? ကိုဘာသာပွနျတငျပွပေးလိုကျပါတယျ။
အကွောငျးပွခကျြ ၁။ သူတို့သဘာဝအတိုငျးပွောတာမြိုးဖွဈလို့ It's Just The Way They "Chew The Fat"
ပထမဦးစှာ ဘနျးစကားတှေ၊ အီဒီယံတှကေိုလလေ့ာသငျ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒါဟာသူတို့ဒီလိုပဲပွောလရှေိ့လို့ပါ။
သူတို့သုံးသှားတဲ့ဘနျးစကားကိုကိုယျနားမလညျရငျသူတို့ဘာပွောတယျဆိုတာလဲနားလညျမှာမဟုတျတော့ဘူးပေါ့.ကိုယျအင်ျဂလိပျစကားပွောသငျတနျးတှေ၊ ကြောငျးတှမှောသငျခဲ့ရတဲ့အတိုငျး Formal English စာစကားကိုသာတှယျကပျထားရငျ တကယျ native speakers တှနေဲ့တှကွေုံ့ပွောဆိုရတဲ့အခါ နားလညျဖို့အခကျအခဲနဲ့ကွုံရပါလိမျ့မယျ။ ဘရာဇီးနိုငျငံမှာရှိတဲ့နိုငျငံတကာလုပျငနျးကွီးတဈခုမှာ ကြှနျတေျာ့မိနျးမနဲအလုပျအတူလုပျဖူးတဲ့လူငယျတဈယောကျရဲ့ဖွဈစဉျဟာ နမူနာရိုးရိုးလေးပဲဖွဈပါတယျ။ တဈနတေ့ော့ အမရေိကနျလုပျငနျးရှငျတဈခြို့ စီးပှားရေးပူးပေါငျးလုပျဖို့ကုမ်ပဏီကိုရောကျလာကွပါတယျ။ သူတို့ဟာ ကုမ်ပဏီထဲလြှောကျပတျပွီးလူတိုငျးနဲ့အလာပသလာပပွောနကွေပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့အထဲကတဈယောကျက ဒီလူငယျရဲ့အလုပျစားပှဲပျေါခါးကိုငျးပွီး "What do you call yourself?" လို့မေးလိုကျတယျ။ ဘဝတဈလြှောကျလုံးအင်ျဂလိပျစာလိုကျစားလာတဲ့ သနားစရာသတ်တဝါလေးဟာ သူ့ကိုဘာမေးတယျဆိုတာ မသိရှာပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ တဈလြှောကျလုံးကြောငျးမှာ နာမညျဘယျလိုချေါသလဲလို့မေးခငျြရငျ "What's your name?" လို့သာမေးဖို့သငျယူခဲ့ရလို့ပဲပေါ့။
ဒီတော့ သခြောတာက အင်ျဂလိပျစကားကိုမိခငျဘာသာစကားအဖွဈပွောဆိုသူတှနေဲ့ ဘယျတော့မှစကားပွောဖို့မရညျရှယျထားဘူးဆိုရငျတော့ အကွောငျးအရာတဈခုကို ပွောဆိုပုံတဈမြိုးထကျပိုတတျဖို့ သောကရောကျစရာမလိုဘူးလို့ထငျတာပဲ။
အကွောငျးပွခကျြ ၂။ အသုံးထူးစကားတှကေိုကွားတာနဲ့နားလညျပါလိမျ့မယျ။ You Will "Get It" When You Hear The Expressions"
ဒုတိယအကွောငျးပွခကျြကတော့ အကွောငျးအရာတဈခုကို ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ပွောဆိုတတျအောငျလလေ့ာထားသငျ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အသုံးမြားတဲ့ အီဒီယံတှေ ဘနျးစကားတှကေိုစာဖတျရငျးတှတေဲ့အခါ သူတို့ကို ကိုယျ့ရဲ့မိခငျဘာသာစကားသို့ တဈလုံးခွငျးကောကျယူဘာသာပွနျမိလိမျ့မယျ။ အသုံးထူးစကားစုဖွဈလို့ တဈလုံးခွငျးဘာသာပွနျတဲ့အခါ အဓိပ်ပါယျမရှိဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
ဒါကွောငျ့မလို့ မိမိကိုယျကို အီဒီယံတှေ ဘနျးစကားတှနေဲ့ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျဖွဈအောငျစလုပျနပွေီဆိုရငျ native English speakers တှနေဲ့စကားပွောရတဲ့အခါ၊ စာဖတျရငျးတှတေဲ့အခါ ဘာဆိုလိုသလဲဆိုတာ နားလညျနိုငျမှာပေါ့။ ကဲကြောငျးသားအပေါငျးတို့၊ မနှေးအလြှငျ ဘနျးစကားတှေ၊ အသုံးထူးတှေ၊ နယျပယျအလိုကျသုံးတဲ့အချေါအဝျေါတှကေို နားလညျအောငျကြိုးစားကွပါတော့လို့တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
Permalink Reply by Win Hlaing on November 21, 2012 at 10:54
Permalink Reply by Thandar on November 21, 2012 at 12:57
Permalink Reply by khinsuyee on November 21, 2012 at 16:21
thanks for this mail
Permalink Reply by hlwan oo on November 21, 2012 at 16:26
Permalink Reply by Aye Aye Sann on November 22, 2012 at 14:19
yes ..ok ..u said we need to learn for them ..i wanner learn..but may i know how to learn those bro ..
Permalink Reply by aunghtedmyat on November 23, 2012 at 10:12
I don't known how we should study this language. What kind of books are suitable for us. Please tell me reply.
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on November 23, 2012 at 10:37
next lesson on Wednesday will be about how to learn those
Permalink Reply by 2an9d9sp4gc1n on November 26, 2012 at 13:28
Permalink Reply by Win Win Than on December 27, 2012 at 5:51
Permalink Reply by myint soe on July 19, 2013 at 19:41
Please guide us how we can study.Sar!Thank
Permalink Reply by aungnaingthu on October 7, 2014 at 18:35
Permalink Reply by Monica on June 6, 2017 at 15:49